नाम मे कि राखल छै ? « News of Nepal
धरहरालाई हिजो सोमबार मैथिल भाषा बोलौं–बोलौं लागेर आयो । भाषा मीठो, नरम र लयात्मक भएका कारण धरधरा प्रदेश नम्बर २ तिर पुगेका बेलामा मात्र होइन, काठमाडौंमै पनि मैथिलभाषी साथीहरु फेला परे भने बोलिहाल्छ । तर हिजो चाहिं ठूलै नेताका अगाडि उभिएर हिन्दीको ‘नाम मे क्या रखा है’ लाई मैथिल बनाएर बोल्न मन लाग्यो । जनकपुरका ठूला नेता राजेन्द्र महतोका अगाडि उभिएर ‘नाम मे कि राखल छै ?’ भन्न पाउनु आफैमा सम्मानको विषय पनि हो ।
खासमा के भयो भने, आठ जना व्यक्तिहरु जसले नक्कली विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएका थिए, को नागरिकता सरकारले रद्द गरिदियो । त्यसमा राजेन्द्र महतो नाम पनि प¥यो । धरहराका प्रिय नेता जनकपुरधामका प्रातस्मरणीय पुरुष राजेन्द्र महतोको नामसँग यो नाम मिल्न पुग्यो ।
नाम मिल्यो त मिल्यो, तर मिडियाले पो चित्त दुखाइदिए त । नेताजीले निकै चित्त दुखाउनुभयो, भन्नुभयो, ‘नाम मिलेकै कारणले राजेन्द्र महतोको नक्कली नागरिकता भनेर लेखिदिए, मिडियावालाहरु मप्रति कति दुराग्रह राख्दारहेछन् भनेर थाहा भयो, शीर्षकमा राजेन्द्र महतोको नक्कली नागरिकता भनेर लेख्दा मै परें कि परिनँ ? अर्को कसैको नक्कली नागरिकता हो, मेरो त सक्कली नै हो नि !’
आफ्ना प्रिय नेताको यस प्रकारको चित्त दुखाइ सुनेर धरहराको छाती चिरियो । कुनै लप्पनछप्पन नगरी सोझो राजनीतिमा लागेका महतोको नाम कुन नक्कली नागरिकतावालासँग मिल्न पुगेछ ! ल नाम त मिल्नपुग्यो रे ल, पत्रकारले नाममाथि व्यापार गरिदिनुपर्ने ! शीर्षकमै नाम लेख्नु नै थियो भनेपनि कोष्ठभित्र ‘नेता चाहिं होइनन् है’ भनेर लेखिदिएको भए कसको के जान्थ्यो ! अब धरहराले त निर्णय ग¥यो, आफ्ना प्रिय नेतालाई चित्त दुख्नेगरी लेख्ने मिडियासँग कट्टी, लौ जा !